Gufgaf|Online आकाशको सबथोक बनिन् स्वस्तीमा !
आकाशको सबथोक बनिन् स्वस्तीमा !
गायक शिव परियारको नयाँ गीत ‘तिमि नै मेरो सास हौ’ सार्वजनिक भएको छ । ‘तिमि नै मेरो सास हौ’ प्रेम दिवसको छेको पारेर सार्वजनिक गरिएको यो गीत दर्शक स्रोतलाई प्रेम दीवसको लागि उपहार भएको गायक शिवले बताए ।
सार्वजनिक गीतमा एकनारायण भण्डारीको शब्द रहेको छ भने आशिष अविरलको संगीत तथा एरेन्ज । गीतमा अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र अभिनेत्री स्वस्तीमा खड्कालाई फिचर गरिएको छ । यो जोडीले यस अघि शिव परियारकै आँशुको अर्थ बोलको गीतमा पनि काम गरेको थियो ।
यस गीतलाई गायक शिव परियारकै आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट सार्बजनिक गरिएको छ । सुहाना क्रियसनको प्रस्तुति रहेको यस गीतको भिडियो आकर्षक छ । बुद्ध थापाको छायाकंन रहेको यस गीतको भिडियोलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोलाई बिकाश धमलाले सम्पादन गरेका हुन् ।
भिडियोमा सुबोल थापाको कोरियोग्राफी रहेको छ ।